Posted on Dai 12, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
Iyo GoPro kamera yakave inonzwikwa hombe mumakore mashoma apfuura nekuti inobvumidza vanhu kuti vanyore zvakanyanya hupenyu hwavo vachiita chero chiitiko. Makamera eGoPro anotendera vanhu kuti vanyore zvavakasangana nazvo vachikwanisa kuzviita zvisina kumira vasina kubatirira kamera.
Mawiricheya vashandisi vari kushandisa iyo GoPro kamera kuti inyore zviitiko zvavo pasina kubata kamera vachiri kuita. Isu tinotsigira vanhu vanoita izvo zvavanoda uye vanofarira kuzvinyora, heano mamwe mavhidhiyo anosanganisira wiricheya vashandisi vachiita zviitiko zvinonakidza.
Vhidhiyo # 1: Paraplegic TV Reporter Anoenda Bungee Jumping muWhistler, Canada
Kune chimwe chezvinhu zvinotyisa zvandingafungidzira ndichiita kubva pa wiricheya - bungee kusvetuka - ino inotevera vhidhiyo inoratidza izvo chete. Tara Weber, mutori wenhau akaremara T4 uye mutori wenhau weCanada (aigara kwenguva refu ari mutori wenhau muTV munzvimbo yeToronto). akafunga kuenda bungee achisvetuka kubva kwaari wiricheya, uye akakumbira hama yake yemavhidhiyo munyori kuti abatsire kuinyora kushandisa yake GoPro kamera.
Kwaakakwakukira - Whistler, Canada - ingangove imwe yenzvimbo dzakanakisa kuenda bungee kusvetuka muNorth America. Akaenda kuburikidza naWhistler Bungee zvakare, chipfeko chakasvetuka chebungee muWhistler, Canada uye ivo vaive vakanyanya kumugara. wiricheya (anofarira remara vafambi, nyora chinyorwa). Vakadaro vachimukanda pazambuko mune wiricheya, asi akabhadhara. heh
Vhidhiyo yacho pachayo inongori maminetsi matatu chete, asi inoratidza zvese zvaunoda, kubva kwaari kuti akwane-uye agadzirirwe kusvetuka pachayo, ese aine kamera yakanamatira paari. wiricheya. Kunyangwe kuve kupenga kutya kukwirira, iyi vhidhiyo inotyisa kwazvo zvinoita kuti ndiite kuda kuzviedza (ndoda).
Tarisa kusvetuka kukuru kwaTara kuWhistler
Vhidhiyo # 2: Akaremara Pro-Surfer Christiaan "Otter" Bailey paDawn Patrol
Christiaan "Otter" Bailey, mumwe wevashoma vakaremara pro-surfers mupasi uye a SCI superstar yatakanyora, anga ari pro surfer kubvira anga aine makore manomwe ekuberekwa. Christiaan zvakadaro akaoma mitezo makore masere apfuura achitora vhidhiyo skateboard (chimwe chishuwo chake), asi haana kumira kuita izvo zvaanoda.
Muvhidhiyo iyi inomuratidza achiita dawn patrol (kutarisa mafungu ezuva racho) achiri kushanda pakamba yakashandurwa yemwana yekushambira mukati Kosita Rika, Christiaan anoisa GoPro kamera kumberi kwebhodhi rake refu kuti awane epic mifananidzo yake, uye mhou tsvene inotyisa. Ukasakurudzirwa neizvi, unogona kunge wakafa (chingoti sayin ').
Tarisa Christiaan achifamba padumbu rake muCosta Rica
Vhidhiyo # 3: IVA Ane Hasha - Mifananidzo ye hwiricheya Lacrosse
Kana iwe wakagara uchinge uchinge uchityisidzirwa kuyedza boka rakashandurwa mutambo, iyi GoPro mifananidzo ye wiricheya lacrosse ligi muU.SA. zvichachinja pfungwa dzako. Iyo inoratidza kukurumidza uye nehasha mutambo uyu unogona kuva, uye maveti akakuvara anochida.
Dai iwe waive mumitambo ine hukasha pamberi pako kuipa uye hauna kufunga kuti iwe unogona kuwana mutambo ungakupa izvo, wiricheya lacrosse ndipo pairi. Vhidhiyo iyi yakareba, pa5+ maminetsi, asi kana iwe wagara waida kutamba, iyi inoratidzika kwazvo (uye miniti yekutanga ndiyo yakanyanya kunaka).
Tarisa mapoka maviri achirwa nawo achitamba wiricheya lacrosse
Ndichiri kutora yako wiricheya adventures inouya pakakwirira mutengo, (GoPro kamera inotanga pamadhora makumi masere nemana), kana uine mari uye nehunyanzvi hwekuenda nayo, zvinopfuura kukosha kwayo. Iwe unogona kutowana kugona kwazvo pairi zvekuti unogona kutengesa mavhidhiyo ako kunzvimbo dzekumutsiridza, kana kutanga blog uye kuwana vamwe vashambadziri, uye icho chingave chinhu chakanaka kwazvo.
- Dzidza ZVIMWE: GoPro Kamera kubva kuHero
Uri kutamba neni here? FCC Inotendera Chirongwa Chekufunga nezveInternet Regulation